China Square nati vagadziri uye vatengesi | Jiuhe
Chii zvakare, ine yakanakira kukosha kweiyo diki diki, kurema kwechiedza, kusagadzikana kukonzeresa, yakatsetseka uso, kupfeka kurwisa, yakakwira usahihi, mutengo wakaderera, yakareba uchishandisa hupenyu pamwe nemari yakakwira inoshanda. Iyo Carbon Steel Zinc Plated Square Nut yakakodzera kumotokari yemagetsi, indasitiri yemagetsi, indasitiri yekuvaka ngarava, bhirijini engineering, pombi uye vheji yekugadzira indasitiri, fenicha inogadzira fenicha, indasitiri yemagetsi, indasitiri yemagetsi yemagetsi, indasitiri yekutaurisa, yekushongedza kwekuvaka, indasitiri yemagetsi uye yemagetsi. yekuumba yekugadzira indasitiri, yezvokurapa machira indasitiri, Avhi indasitiri, mauto ejanji kugadzira, etc. Inowana mukurumbira wakanaka pakati pevatengi pasi rese nekuda kwekuita kwakanyanya.
Carbon simbi Nylon nati ine zviri nani asidhi uye alkali kuramba, pakati peiyo yakanakisa PVDF nzungu inoteverwa nepypropylene, ose ari ane akasimba asidhi uye alkali kuramba, nepo nylon nzungu dzisina murombo acid uye alkali kuramba kupikiswa neyaimbova maviri. Naizvozvo, nylon nzungu, kunyanya PVDF nzungu, dzinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yeasidhi uye alkali yekupikisa yemamwe maindasitiri emagetsi.
Pedza Ruvara Zinc
Giredhi 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Type musoro wechiwere
Kurongedza Makatoni + epurasitiki Mabhegi
Tinogona kupa ma sampuli emahara mukati memazuva manomwe kana iyo furu iripo / ine mumatanda, uye mushure mekurongeka kurongeka, tinodzosera mienzaniso yekutakura.
Yakanakisa simbi isina mapapiro mapapiro enimbi anchor bolt ekuvaka fastener
bani kana zinc yakaturika kana nhema
DINANI ISO JIS BA ANSI
kuvaka indasitiri michina
Yepfuura: Flange nati
Inotevera: Kiya nut